China PET Sticker Remover BT-336 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
BT-336 yakagadzirirwa kubvisa chinamirwa pamusoro pePET pane tembiricha yakaderera.
Inoshandiswa kune ese marudzi esitikiti pamusoro pePET substrate zvinhu.
Zvakanakira kushandisa BT-336 zviri pazasi:
1.Haisi kukuvadza iyo substrate zvinhu mushure mekuchenesa, haisi yero uye inopwanya.
2. Bvisa chinamira zvakanaka nezvimwe zvinosvibisa panguva imwe chete.
3. Maitiro acho ari nyore uye anoshanda, kupedzisa kwenguva imwe chete, mutengo wakaderera.
4. Inodorous, isina chepfu, haina kusvibisa nharaunda. Kugadzirwa kwakachena.
Plastiki uye Rubha
25kg / dhiramu repurasitiki
1, chigadzirwa ichi chinofanira kuchengetwa mukunzvenga chiedza nzvimbo inotonhorera.
2, Splashes zvisina hanya muziso, ndapota shandisa iyo hombe yakajeka mvura kugeza.
3, iro gumvu glove rinodiwa kana richishanda.
Ine zvigadzirwa zvekutanga-kirasi, basa rakanakisa, kuendesa nekukurumidza uye mutengo wakanakisa, isu takunda kurumbidzwa kukuru kubva kune vatengi vekunze. Zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kuSoutheast Asia, Middle East, Europe nedzimwe nzvimbo.
"ZVINOTAURWA NDIYO CHOKUTANGA UYE purofiti ICHOKWADI", aya ndiwo mazano edu anotungamira mubhizinesi.
Kuve wepamusoro tekinoroji, CHINA BGT zvigadzirwa zvine hunhu hwekujeka kwepamusoro, hapana huturu, hapana hwema uye hwapfuura "Kudya Kwekuchengetedza & Toxicity Bvunzo" uye RoHS bvunzo neSGS. Izvo zvigadzirwa zvinogona kuiswa mukudyidzana kwechikafu.
CHINA BGT ichave yakazvipira kusimudzira kushandira pamwe kwepedyo uye kwenguva refu nemamwe mafemu ari kunze kwenyika uye epamba, zvichibva pane kwedu tekinoroji kugadzira. CHINA BGT ichapa kune vatengi vedu nezvakanaka zvigadzirwa kwete chete, asi zvakare neyakagadzikana mhando, kutendeseka pamwe nebasa riri nani.
(Kuti uwane ruzivo uye yakazara TDS inogona kupihwa sekukumbira kuburikidza “Siya Mharidzo Yako”)
Pashure: Ink Remover BT-301/302
Zvadaro: Ink Remover BT-300